Fametrahana samboady ny Loholon’i Madagasikara MAHALINY solon’ny Loholon’I Madagasikara FERNAND Jeannot – Sénat de Madagascar
Fametrahana samboady ny Loholon’i Madagasikara MAHALINY solon’ny Loholon’I Madagasikara FERNAND Jeannot
Araka ny andininy faha-72 ny Lalampanorenana sy ny andininy faha 10 ao amin’ny Fitsipika anatin’ny Antenimierandoholona dia voalaza fa : ”mandritra ny fe-potoana iasany, ny Solombavambahoaka dia tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra any amina vondrona vaovao, ankoatra ny anaran’ny vondrona izay nahavoafidy azy, raha tsy izany dia aongana. Raha misy fandikana ny andalana etsy aloha, dia ambaran’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana ny sazy fanonganana. “Ny fepetra voalazan’ny andininy faha-71 hatramin’ny faha-79 dia ampiharina amin’ny Antenimierandoholona ihany koa” (And. 85).
Satria moa ny Loholon’i Madagasikara FERNAND Jeannot dia efa nametra-pialana tsy ho ao anatin’ny vondrona Tiko i Madagasikara (TIM) intsony no sady nifindra ho vondrona Isika Rehetra miaraka amin’i Andry RAJOELINA (IRD) dia nampiharina ny sazy fanonganana izay voalazan’ny Lalampanorenana. Ny talata 14 mey 2019 ary, dia nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana tao amin’ny didy izay navoakany fa naongana tsy ho Loholon’I Madagasikara intsony ny Loholon’i Madagasikara FERNAND Jeannot noho ny fandikàna ny Lalampanorenana. Noho ny fahabangan’ny toerana, dia notendrena hisolo toerana azy Andriamatoa MAHALINY izay mpiray lisitra taminy nandritra ny fifidianana Loholon’I Madagasikara.
Araka izany dia notanterahina ny alarobia 29 mey 2019, tao amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona Anosy, ny fametrahana ny samboady maha Loholon’i Madagasikara an’Andriamatoa MAHALINY. Ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO moa no nanatanteraka izany. Fotoana izay natrehin’ny Fianakaviamben’ny Antenimierandoholona sy ireo olona akaiky ny Loholona vaovao.
Ny Loholona MAHALINY moa dia “Médecin Chef” ny Dispensaire FJKM Kaominina Andranofasika Distrika Ambatoboeny, ary Filoha Lefitry ny TIM faritra Boeny.
Nambaran’ny Loholona MAHALINY fa vonona hiara-hanohy ny asa izay efa mandroso izy, mba tsy hampitsanga-menatra ny Antenimierandoholona.
Ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO kosa tetsy andaniny dia nilaza fa ambanin’ny lalàna daholo ny vahoaka Malagasy, ny fampiharana ny lalàna ao anatin’ny fanarahan-dalàna no tena zava-dehibe ahafahana mijery ny tombotsoa iombonanan’ny Firenena ary tsy maintsy mandray andraikitra amin’ny fampiharana izany lalàna izany ny Antenimierandoholona.